Dhismayaasha Dadweynaha - Shiinaha Zhenyuan Qaabdhismeedka Birta Injineernimada Co., Ltd.
Qaab dhismeedka, aagagga waxqabadka, abaabulka dadka badan iyo daadgureynta dhismayaasha dadweynaha, iyo sidoo kale cabbirka, qaabka iyo deegaanka jir ahaaneed (tirada, qaabka iyo tayada) booska. Kuwaas waxaa ka mid ah, diiradda ugu weyn waa dabeecadda adeegsiga meelaha dhismaha iyo hagaajinta howlaha.
In kasta oo dabeecadda iyo nooca isticmaalka dhismayaasha kaladuwan ee dadweynaha ay kala duwan yihiin, haddana waxaa loo qaybin karaa saddex qaybood: qaybta isticmaalka ugu weyn, qaybta isticmaalka labaad (ama qaybta kaabayaasha ah) iyo qaybta isku xidhka taraafikada. Naqshadeynta, waa inaan marka hore qabsanno xiriirka seddexdan qaybood ee isku-dubbaridka iyo isku-darka, oo aan u xallino khilaafaadyo kala duwan mid-mid si aan u helno caqli-galnimada iyo kaamil ahaanta xiriirka shaqeynaya. Xiriirka qaybaha saddexdaan qaybood, qoondaynta booska isku-xirnaanta taraafikada ayaa inta badan door muhiim ah ka ciyaara.
Qeybta isku xirka taraafikada guud ahaan waxaa loo qaybin karaa saddex qaab oo aasaasi ah: taraafikada jiifka ah, taraafikada taagan iyo taraafikada xarunta.
Qodobbada Muhiimka ah ee Jadwalka Gawaarida Gawaarida:
Waa inay ahaataa mid toos ah, ka hortagaysa qallooca iyo leexashada, oo si dhow ula xiriirta qayb kasta oo booska ka mid ah, oo ka sii wanaagsan iftiinka maalinta iyo iftiiminta. Tusaale ahaan, socodka.
Qodobbada Muhiimka ah ee Jadwalka Gawaarida Gawaarida ah:
Goobta iyo tirada waxay kuxirantahay baahiyaha shaqeynaya iyo shuruudaha la dagaalanka dabka. Waxay u dhowaan doontaa xarunta gaadiidka, si siman loogu habeeyay dhibcaha aasaasiga ah iyo kuwa sare, kuna habboon tirada isticmaaleyaasha.
Qodobbada Muhiimka ah ee Gaadiidka Hub:
Waxay noqon doontaa mid ku habboon in la isticmaalo, ku habboon booska, qaab dhismeed macquul ah, ku habboon qurxinta, dhaqaale ahaan iyo waxtar leh. Labada adeegsi ee adeegsiga iyo abuurista fikirka farshaxanimada ah ayaa lagu xisaabtami doonaa.
Naqshadaynta dhismayaasha dadweynaha, iyadoo la tixgelinayo qaybinta dadka, isbeddelka jihada, kala-wareegga booska iyo isku xidhka waddooyinka, jaranjarooyinka iyo meelaha kale, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo hoolal iyo qaabab kale oo bannaan si loo ciyaaro doorka xarunta gaadiidka iyo kala wareejinta booska.
Naqshadeynta gelitaanka iyo bixitaanka hoolka laga soo galo inta badan waxay ku saleysan tahay laba shuruudood: mid waa shuruudaha isticmaalka, kan kalena waa shuruudaha ku saabsan habeynta goobta.
Qaybinta Shaqada ee Dhismayaasha Dadweynaha:
Fikradda aagag shaqo ayaa ah in loo kala saaro meelaha iyadoo loo eegayo shuruudo kaladuwan oo kaladuwan, iyo in la isku daro oo loo qaybiyo iyadoo loo eegayo isku xirnaantooda;
Mabaadi'da aagagga waxqabadka waa: aagag cad, xiriir ku habboon, iyo habayn macquul ah iyadoo la raacayo xiriirka ka dhexeeya guud ahaan, heerka labaad, gudaha, dibedda, buuq iyo xasillooni, sidaa darteedna mid walba booskiisa u leeyahay; Isla mar ahaantaana, marka loo eego shuruudaha isticmaalka dhabta ah, goobta waa in loo habeeyo iyadoo loo eegayo sida ay isugu xigaan howlaha dadka qulqulaya. Isku-dhafka iyo qaybinta booska ayaa qaadan doonta meesha ugu weyn ee udub-dhexaadka u ah, iyo isku-habeynta booska labaad wuxuu noqon doonaa mid ku habboon dadaalka shaqada goobta ugu weyn. Meesha lagala xiriiri karo dibadda waa inay udhowdahay xarunta gaadiidka, iyo booska loogu adeegsan karo gudaha oo noqon doona mid yara qarsoon. Isku xirnaanta iyo go'doominta booska waa in si habboon loo maareeyaa iyadoo lagu saleynayo falanqeyn qoto dheer.
Ka daadgureynta dadka ee dhismayaasha dadweynaha:
Qaxidda dadka waxaa loo qaybin karaa xaalad caadi ah iyo xaalad deg-deg ah. Ka bixida caadiga ah waxaa loo qaybin karaa mid isdaba joog ah (tusaale dukaamada), meel dhexe (tusaale tiyaatarada) iyo iskudarka (tusaale hoolalka carwooyinka). Ka bixitaanka degdega ah waa meel dhexe.
Daad gureynta dadka ku jira dhismayaasha guud waxay noqon doontaa mid hagaagsan. Dejinta aagga waxtarka leh ee xudunta waa in la tixgeliyaa, waana la kala firdhin karaa markii loo baahdo si looga hortago ciriiriga xad-dhaafka ah. Hawlaha joogtada ah, waxaa habboon in si gooni gooni ah loo dejiyo meelaha laga baxo iyo tirada dadka. Sida ku xusan xeerka ka hortagga dabka, waqtiga ka bixitaanka waa in si buuxda loo tixgeliyaa oo la xisaabiyaa awoodda taraafikada.
Shuruudaha tirada, qaabka iyo tayada hal boos:
Cabirka, kartida, qaabka, laydhka, hawo-qaadashada, qorraxda, heer-kulka, huurka iyo xaaladaha kale ee hal meel oo keliya ayaa ah qodobbada aasaasiga ah ee ku habboonaanta, sidoo kale waa dhinacyo muhiim ah oo ka mid ah dhibaatooyinka shaqada dhismaha, kuwaas oo si dhammaystiran loogu tixgelin doono naqshadeynta.
Dhismooyinka dadweynaha waxaa ka mid ah dhismooyinka xafiisyada, xafiisyada waaxyaha dowladda, iwm. Dhismayaasha ganacsiga (sida xarumaha dukaamaysiga iyo dhismayaasha dhaqaalaha), dhismooyinka dalxiiska (sida hudheelada iyo goobaha madadaalada), sayniska, waxbarashada, dhaqanka iyo dhismayaasha caafimaadka (oo ay kujiraan dhaqanka, waxbarashada, cilmi baarista sayniska, daaweynta caafimaadka, caafimaadka, dhismayaasha isboortiga, iwm), dhismayaasha isgaarsiinta (sida boostada iyo isgaarsiinta, isgaarsiinta, xarumaha xogta iyo qolalka warfaafinta), dhismayaasha gaadiidka (sida garoomada diyaaradaha, xarumaha tareenka xawaaraha sare ku socda, saldhigyada tareenada, tareenada dhulka hoostiisa mara iyo xarumaha basaska) iyo kuwa kale
Goobtu waa taagantahay